Iwu Mbupu & nkwụghachi
ỤLỌ NDỊ NA-ECHI
Ndị na - eweta ngwaahịa nwere ike (ọkachasị maka iwu omenaala) chọrọ oge nhazi ọzọ tupu mbufe nke ihe. Ndị ahịa ga-amara gị ọkwa na ọnọdụ ndị a. Oge nhazi oge site na ndị na-ebunye ha sitere na 1 ruo ụbọchị 5. Dabere na ebe ị na-aga n'ime US ma ọ bụ mba ụwa, biko hapụ n'etiti 1 ruo ụbọchị 14 maka iwu gị iji rute (dabere na usoro mbupu eji). Iwu ngwaahịa n'ime US nwere okpokolo agba oge. Ọ bụrụ na ihe karịrị ụbọchị iri abụọ agafeela biko zitere anyị ozi na [email protected] iji nyochaa ọnọdụ nke iwu gị.
Akwụkwọ na ihe ngosi doro anya nke eji
CD, DVD, VHS teepu, ngwanrọ, egwuregwu vidio, teepu kaseti, ma ọ bụ ihe ndekọ vinyl emepeworo
Ọ bụrụ na ịmeela ihe a niile ma ị ka anatabeghị nkwụghachi gị, biko kpọtụrụ anyị na [email protected]
Naanị anyị na-edochi ihe ma ọ bụrụ na ha nwere ọrụ mebiri emebi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe ya maka otu ihe, zitere anyị email na [email protected] ma zipụ ihe gị na:
Iji weghachi ngwaahịa gị, ịkwesịrị izipu ngwaahịa gị na:
Kwụghachi ụgwọ nwere ike itinye dabere na ọnọdụ nke usoro a ma akagbuo ma ọ bụ weghachi ihe ahụ.